Imenyu elungisekayo yeCinnamon | Kusuka kuLinux
Yize sengihlale e-Archlinux iminyaka eminingi, ushintsho olusuka ku- I-KDE4 a I-Plasma 5 kungiholele okwesikhashana ezindaweni I-GTK3, lapho ngihlangana nezimbungulu nezimbungulu ezincane -izincane- ukuthi ngasizathu simbe angifuni ukukubekezelela (ngiyaguga?). Ngenhlanhla kakhulu I-Cinnamon njengoba Igobolondo le-Gnome sezivele zisongwe kakhulu futhi zinikeza ukuzinza cishe nginamadwala manje.
Ngemuva kokunambitha ubulula be Igobolondo le-Gnome izinyanga - yize bengingakaze ngikholwe indlela yayo eqinile nokuntuleka kwezinketho engizithatha njengeziyisisekelo - nginqume ukwamukela iCinnamon ngaphandle kwemibandela, indawo ezenzakalelayo I-Linux Mint, futhi kufanele ngivume ukuthi umbono wayo wakudala wedeskithophu ungenze ngathandana. Ngeke kube yinto engenangqondo ukusho ukuthi bobabili iCinnamon nePlasma 5 babelana ngendlela efanayo, okungukucwenga umqondo wakudala wedeskithophu, osukhona emashumini eminyaka, ngaphandle kokungeza izinto eziyinqaba ezinemiphumela engalindelekile kumxube. Uma kusebenza, ungayithinti.
ECinnamon, njengamanje nginguqulo 2.6, ngizizwa ngisekhaya; ukuhlelwa kwezinto nezinto ezisebenza kuzo kunengqondo ngokwedlulele kimi, kufinyelela ibhalansi ethandekayo phakathi kokulula nezinketho eziningi. Njengokungathi lokho bekunganele, nakulabo abathanda ukwenza ngezifiso "ngokuningiliziwe" kwezindawo zabo zomsebenzi zeLinux, kune-applet eguquguqukayo eshintsha imenyu yohlelo oluzenzakalelayo, esizokhuluma ngayo ngezansi: Imenyu elungisekayo.
Inqubo yokufaka ibingabi lula. Kumele sichofoze kwesokudla kunoma iyiphi iphaneli bese ukhetha «engeza ama-applet kuphaneli». Ewindini elivulekayo, sishintshela kuthebhu ethi "Ama-Applets atholakalayo (ku-inthanethi)", funa u- "Okulungisekayo Imenyu", hlola ibhokisi bese uqhafaza ku- "Faka noma ubuyekeze izinto ezikhethiwe". Akunasidingo sokuhlanganisa noma yimaphi amaphakheji, noma uthathe uhambo lokuya endaweni engcwele.
Lapho i-applet isingezwe kusistimu yethu nge-track esheshayo, singayifaka kuphaneli ngendlela ebesizokwenza ngayo nganoma iyiphi enye into. Ngithanda ukusebenzisa ipaneli ephezulu ngokuhlangana nedokodo, yize muva nje ngenza ngaphandle kwesibili, ngakho-ke kimi imenyu ihlala ekhoneni eliphezulu kwesobunxele.
Ukuhlelwa kwalolu hlelo lokusebenza kumane kuhlanya, ngenxa yenani lezindlela ezitholakalayo kanye nokuguqulwa okuncane okuhambisanayo. Ubungeke ucabange ukuthi bengizobabuyekeza bonke, akunjalo? Ngincoma ukuthi ulungiselele inkomishi enhle yekhofi - noma ikharafa engu-10 litre- bese uqhubeka nokubuyekeza izinketho ngaphandle kokuxhamazela, uma uthanda izinga lokulawula nokunemba okufana nalokho kwamawashi aseSwitzerland.
Ngibala izindlela ezahlukahlukene zemenyu eziyi-18, kufaka phakathi imenyu yohlobo lwe-Windows 7, olunye uhlobo lwe-Gnome 2 (ah, nostalgia), okuhlukile kweWhisker, iMint Menu yempilo yonke, ukulandelwa kweKicker ... Imenyu ayikho uhlobo lweWindows 95, okuyinto ehamba phambili emhlabeni, engivimbela ukuthi ngiyinikeze uphawu oluphakeme kakhulu (phawula okuhlekisayo).
Kepha ukuguquguquka akugcini lapho, ngoba singacwenga okuhlukile ngakunye kusuka phezulu kuye phansi: engeza amabhokisi ezinkinobho zamandla, uwafake kuhlu, ubonise noma ufihle izinhlelo zokusebenza ozithandayo, ungasebenzi amabhokisi okusesha, fihla imicibisholo yezigaba ukunyathela abanye abasebenzisi, Chitha umhlaba, Njll
Ayikho i-epicurean yobuhle bokuqhafaza okufanele ingayinaki le applet. Okumele ube nakho!
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko » Imenyu elungisekayo yeCinnamon
Ngisebenzisa iCinnamon eMint. Ukucushwa kwami ​​kungukuthi: iphaneli ephezulu, iphaneli ephansi kuphela nohlu lwamawindi avulekile nedokhu ohlangothini lwesobunxele
Lokho kusatshalaliswa kuyisitayela se-Gnome 2 kakhulu, futhi ngiyisebenzisa ngezikhathi ezithile. Idokhu ngumkhuba wami, kepha ngicabanga ukuthi uhlu lwamawindi lusebenza kahle ngazo zonke izindlela.
Lapho kubuntu kuphuma nePlasma ngiyinikeze ithuba layo futhi yasebenza kahle baze bavuselela okuthile futhi lapho konke bekungasekho, iprosesa ibifudumeza ngokushesha okukhulu, ideskithophu ibiqala kabusha, umphathi wesibuyekezo eyekile ukusebenza, ekhombisa ideskithophu ingasasebenzi njengoba kufanele futhi bengingenakukhetha ngaphandle kokubuyela eMint neCinnamon.
ICinnamon yazinza impela ngicabanga futhi abaningi bazovuma ukuthi ingenye yezindlela ezingcono kakhulu zedeskithophu.
I-Plasma 5 entula ukuqopha ifilimu, noma yini abayishoyo. Lapho ngizama ukufaka ama-plasmoid, ideskithophu yami isetha kabusha ngokuphelele ekucushweni kwayo kokuqala, futhi angikuthandi. Kuleli qophelo kwifilimu, engikubuzayo ukuzinza nokuthi konke kuyasebenza; Angisoze ngaqonda ukuthi kungani ama-distros amaningi kangaka ekhethe iPlasma 5 njengokuzenzakalelayo kwawo.
ICinnamon yakho inengqikithi enjani leyo ebukeka imhlophe
Itimu yeCinnamon engiyisebenzisayo njengamanje yiZukitwo Transparent Panel. Futhi i-GTK, uma kungenzeka, yi-Ambiance Colors.
Ngiyakuthanda okushoyo ngokuhlanganisa nokubeka izindawo ezingcwele ... indida mihle yize ibalulekile ...
Ngokubona kwami, amahlaya amancane awalokothi alimaze ,;).
Bengivivinya futhi kukho konke ukulungiswa injini yokusesha ayisebenzi. Umuntu othile uthole i-salba engasile .XD
Kuyivelakancane kakhulu. Iyiphi inguqulo ye-applet oyisebenzisayo? Ngibonile ukuthi ku-beta engu-1.7 bayilungisile inkinga yenjini yokusesha.
Landa i- .zip ekhasini elisemthethweni (iza endatshaneni, esigabeni sesithathu ngicabanga) bese uyikopisha ku: ~ / .local / share / sinamoni / applets
Ngikhohliwe ukuphawula ukuthi ukopisha okuqukethwe okungafakwanga uziphu, kunjalo.
Isivele ivuselelwe futhi yasebenza. ngiyabonga
Yebo, ngicabanga kanjalo, ngizozama ukuthi ngibone kanjani.
Ngizoyizama ukubona ukuthi isebenza kanjani.
Ngihlangane naleyo applet ezinyangeni ezimbalwa ezedlule, kepha okuthize kusinamoni akukangikholisi ... ngabuyela ku-kde ...
Umakhi wayo ukhuluma iSpanishi ukuze bakwazi ukukuthumela iziphakamiso nge-github….
Ingabe kukhona imenyu yomhlaba wonke, isitayela sobunye kubuntu kusinamoni noma umlingani? Ngiyabonga ... ngithole into efanayo esontweni eledlule lapho nginqume ukuzama ama-desktops amaningi ehlukile ukuthola i-gnome 3.16 e-archlinux futhi ngivumelana nawe cishe kukho konke ...
Yebo ikhona, kepha isese-beta futhi ngokusobala inezinambuzane ezincane. Ungazama http://cinnamon-spices.linuxmint.com/applets/view/229
Noma kunjalo, kudinga amaphakheji avela ku-AUR. Kulezi zinsuku ngimatasa kancane, kepha uma nginesikhashana nje ngiyasibuka futhi uma kunesidingo ngilayisha okokufundisa.
I-PS: Ngabe ukhona owaziyo ukunika amandla ukusheshiswa kwehardware kwesinamoni, yiphutha elivelayo njalo lapho ngingena ngemvume, futhi lingibangela ukuba ngisale kancane ... I-distro yami i-archlinux futhi ngisebenzisa abashayeli be-nvidia abaphathelene.
U-Eduardo Ramirez kusho
Ezinyangeni ezi-4 ezedlule ngishiye isinamoni neminti, ngifanele ngiyilungiselele ngezindlela eziyinkulungwane ezahlukene, bekuyinto yokuzilibazisa emnandi kakhulu. Imenyu elungisekayo yeza ukuyenza ifane ne-gnome 3 ngaphandle kokuyazi, futhi lapho ngibona ukuthi ikhona, ngishintshele ku-debian gnome nn
Phendula u-Eduardo Ramirez
Isandiso esihle kakhulu seCinnamon this. Engikukhumbule kakhulu nge-Whisker, i-Unity Gnome Shell bekwazi ukusesha okuthile ku-inthanethi kusuka kunkinobho yasekhaya. Ngokusobala lesi sandiso sizolungisa inkinga yami, kepha angazi ukuthi usesho lwe-inthanethi lusebenza kanjani futhi angazi ukuthi lusekelwa ku-Arch Linux. Ikhasi lonjiniyela leMenyu Elungisekayo libonakala linokubamba igqubu nomphakathi we-Arch. Mhlawumbe ngidinga ukufaka iphakethe elingafakiwe ngaphambili ku-database ye-Arch noma njengokuncika kusinamoni?
Cha, ingxabano ibikulabo abaphatha isiza (ngesiNgisi) se-Arch ku-G +, hhayi nanoma ngubani ovela ku-Arch uqobo. Kwakungesikhathi ngiqala ukusesha okuthuthukile ku-Imenyu Ekulungisekayo, lapho ngaya khona ngacela usizo lapho, ngoba ngangidinga imibhalo ethize evela ku-pamac, kepha babengafuni ukuthi ngilayishe noma yini kusuka eCinnamon emphakathini, njengokujwayelekile, Ngacasuka. Ngokuphathelene nokuseshwa kwewebhu, benginenkinga, ngiyiphinde ngiyilande kusuka kusayithi lokuthuthukisa ukuze ngibone ukuthi iyakusebenzela manje.
UJiminy Cricket kusho
I-athikili enhle futhi emnandi. Uma ngike ngashintshela kuCinnamon ngizozama. Okwamanje ngiyaqhubeka nge-XFCE nemenyu yayo ye-Whisker, engicabanga ukuthi iyona ehamba phambili emhlabeni (ngaphandle kwe-irony ;-))
Phendula uPepito Grillo
Sawubona, bengisebenzisa iCinnamon isikhathi eside futhi esinye sezizathu eziyinhloko yile menyu, inketho ye- "helena light" kusikrini esigcwele nokuthi ingavulwa futhi ivalwe kusuka kunkinobho yamawindi ngiyayithanda, kepha ngoba Ivuselelwe yaba yi-mint 17.3 Ngibe nezinkinga ezithile, ayiphenduli ngaso sonke isikhathi futhi, kwesinye isikhathi lapho ngiya ukuyilungisa noma ngiyisusa ivimba yonke into futhi ngiphoqeleka ukuqala kabusha futhi ngihlala ngithola umyalezo "repos surgeActor in undefined" engingasitholi isixazululo (ukuyifuna ngifinyelele kule ndatshana) futhi ngiphawule ukubona ukuthi ngabe kukhona omunye umsebenzisi owenzekile futhi owaziyo ukuthi angayixazulula kanjani.
Sawubona Luis, Imenyu Elungisekayo iyahlelwa kabusha, ikakhulukazi ngenxa yokusebenza kabi enakho lapho kudingeka ukubonisa izinto eziningi esikrinini esifanayo, ukushintsha usayizi wemenyu, ukuguqula imikhakha, njll. Imenyu yokuqala yokulungiswa yayihloselwe ukwandiswa kwemenyu yeCinnamon, ukuze noma iluphi ushintsho esakhiweni semenyu yeCinnamon luzosebenza nakuMenyu Okulungisekayo. Noma kunjalo, izehlakalo zakamuva zingiholele ekutheni ngithathe umbono ohlukile. Ukuthembela kwikhodi yangaphakathi yeCinnamon ngaphezu kwenzuzo sekuyinto embi, ngoba iCinnamon ingathatha izindlela ezihluke kakhulu kunaleyo ethi Imenyu Elungisekayo futhi ngenxa yalokho ukusebenza kwayo konakele, njengoba ubonile. Ngiyethemba ukuthi ngaphansi kwezinguquko ezilindelekile (ezingezona ezimbalwa), leyo Menyu Elungisekayo ingasetshenziswa ngaphandle kwamaphutha okungenani ku-Cinnamon 3.0, kepha mhlawumbe kungaba ngaphambili, kuya ngesikhathi esitholayo.
Sebenzisa amaphrinta e-Google Cloud Print njengasendaweni